Calc keessa, iddoowwan hin cinne saaguu hin dandeessu.
Mursaawwan dheeraa saaguuf, Meeshaalee - Dirqaleewwan OfiinSirreessaa- Dirqaleewwan the Mursaawwan bakka buusi filannoo (only on Windows systems) jalaa barbaaduu dandeessa. Filannoon kun haalota murtaa`aa en-dash ykn em-dash ykn (ilaali gargaarsa LibreOffice ) waliin mallattoo hir`isuu tokko ykn lama bakka buusa.
Dabalataan bakka buusuuf gabatee bakka buusaa Meshaalee - OfiinSirreessaa- Bakka Buusi jalaa ilaali. Kanneen biraa keessaa, qaxxaamura ofummaan, bocquu biroo keessatti mataasaa, mursaa gargaaramuun bakka buussuu damdeessa.